stn radio | Archive | Wararka	Monday, November 24th, 2014	Home
Qarax ismiidaamin ah oo wax yar ka hor dhacay wadada hor marta EX-Fiore.
Qarax xoogan oo ismiidaamin ah ayaa waxaa uu ka dhacay wadada hor marta EX-Fiore ee degmada Warta nabada ee magaalada Muqdisho ,qaraaxaasi oo ahaa mid ismiidaamin ah ayaa sida la ...	Xaalad nolol xumo soo wajahday Barakacayaasha ku dhaqan gobolka Gedo.
Dadka ku nool gobolka Gedo ayaa sheegay in Barakacayaasha deegaanada gobolkaasi soo wajahday xalad nolol xumo.
Guddoomiyaha Degmada Garbahaarey Iimaan Cadoow Kaarshe ayaa sheegay in dadka ku dhaqan Magaalada ay soo ...	Maamulka Warta Nabada oo sheegay in qaar ka mid ah goobaha Waxbarashada ay xoog ku heystaan Saraakil ka tirsan Dowladda.
Maamulka Warta Nabada Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in goobaha ugu muhimsan waxbarashada ay xoog ku heystaan Saraakil Ciidan ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Guddoomiyaha Degmada Warta Nabada ayaa ka warbixisay in ...	Faahfaahin dheeri ah oo ka soo baxaya dagaalo ka dhacay Baydhabo.
Faahfaahin dheeri ah oo ka soo baxaya dagaalo shalay ka dhacay deegaano hoosyimaada Magaalada Baydhabo ee Xarunta gobolka Bay.
Dagaalka shalay ayaa dhexmay ciidamada Xarakada Alshabaab iyo Askarta dowladda ku dhexaray ...	Howlgalo dad lagu soo qabqabtay ciidamada dowladda xalay ka sameeyeen Mmuqdisho.
Ciidamada dowladda Federaalka Soomaaya ayaa howlgalo ka sameeyeen Degmada Warta Nabada Ex-Wardhiigley
Sida wararku sheegayaan Ciidamada ayaa baaritaano ka sameeyey Iskuulka Al-Cimra waxayna howlgalada ku soo qabqabteen dhaliyaro fara badan, waxayna ...	Al-shabaab oo ku hanjabay inay la wareegi doonaan gobolada Bay iyo Bakool.
Xarakada Alshabaab ayaa ku hanjabay inay la wareegi doonaan deegaanada ay iminka gacanta ku hayaan Ciidamada dowladda, Itoobiya iyo kuwa AMISOM gobolada Bay iyo Bakool.
Xili Xarakada Alshabaab la wareegeen Degmada ...	Mas’uuliyiinta dowladda iyo golaha Wasiirada oo xalay kullan xasaasi ah ku yeeshay Muqdisho.
Mas'uuliyiinta ugu sareysa dalka Soomaaliya iyo waliba golaha Wasiirada ayaa kullan looga hadlay Cunaqabateynta Hubka la qaaday xalay ku yeeshay Muqdisho tan iyo markii lagu dhawaaqay in la qaaday cunaqabteyntii ...	Ra’iisul Wasaare Saacid oo booqday Xabsi dhexe Muqdisho.
Ra'isul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa maanta booqasho ku tagay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho halkaasi oo dhawaan cudurka shuban biyoodka uu ka dilaacay.
Booqashada Saacid ayaa ...	Qaramada Midoobey iyo Midowga Yurub oo ka wada hadlay Sidii loo xoojin lahaa Howlgalka AMISOM ee Soomaaliya.
Qaramada Midoobe iyo waliba Midowga Yurub ayaa Xarunta golaha amaanka kullan ay ku yeesheen ku soo qaaday sidii ay isaga kaasan lahaayeen howlgalad midowga afrika ee Soomaaliya, iyadoo kullankaasi ay ...	Heshiis dhexdhexaadin ah oo laga dhex wado Beelo ku dagaalamay gobolka Galgaduud.
Maamulka dowladda gobolka Galgaduud ayaa sheegay inay dhexdhexaadin ka dhex bilaabi doonaan beelaha ku dagaalamay gobolkaasi.
Guddoomiyaha gobolka Galgaduud Maamulka dowladda oo u waramayay Idaacada STN ayaa sheegay in loo baahan ...	Next Page »
© 2013 stn radio - All rights reserved. Designed Bye: stn Ltd.